Me-Varotra sy ny ho avin'ny mpivarotra | Martech Zone
Miova haingana ny fivarotana antsinjarany - na amin'ny Internet na ivelan'ny Internet. Araka ny fomban-drazana, ireo orinasa mpivarotra dia matetika no tsy nanana tombom-barotra ambany sy avo lenta mba hamokarana ny valin'ny orinasa ilain'izy ireo mba hiainana. Mahita fihenam-bidy haingana amin'ny fivarotana amin'izao fotoana izao isika izao izay manafaingana ny fitomboana sy mampitombo ny fahombiazany ny teknolojia. Ireo orinasa mpivarotra ambongadiny izay tsy manararaotra dia ho faty… fa ny mpivarotra mampiasa teknolojia kosa no tompon'ny tsena.
Ny fiovan'ny demografika, ny revolisiona teknolojia ary ny fangatahan'ny mpanjifa ho an'ny serivisy manokana dia manova ny sori-dalan'ny dian'ny fanapahan-kevitry ny mpanjifa.
McKinsey amin'ny Marketing mametraka izay inoany fa vaovao Marketing amin'ny efatra P:
misongadina - miantsena ny olona na aiza na aiza misy azy ireo - na eo am-pandriana miaraka amin'ny takelaka izany na eo ampovoan'ny efitrano fampirantianao.
fandraisana anjara - ny olona dia hamorona sy hizara naoty na fanamarihana an-tserasera momba ny orinasa, vokatra ary serivisy.
manokana - Tsy mandeha intsony ny varotra nentim-paharazana sy fipoahana. Ny fifandraisana ara-pientanam-po amin'ny alàlan'ny tantara mitovy amin'izany dia mitarika fiovam-po.
prescriptive - Ny rindranasa finday, ny fikarohana amin'ny Internet ary ny fitaovana sosialy dia manampy ny mpanjifa hifehy ny fiantsenany amin'ny alàlan'ny fizotrany manokana.
Tags: varotraecommerceMcKinseyMcKinsey & Companyahy-varotraonline shoppingfandraisana anjaramanokanamisongadinaprescriptiveantsinjaranyteknolojia fivarotanafiantsenana
BuzzSumo: Fikarohana Top Content avy amin'ny lohahevitra, Domain, na mpanoratra